Qatar Airways inotangazve Marga ndege kubva 2 Chikunguru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Qatar Airways inotangazve Marga ndege kubva 2 Chikunguru
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Málaga resumption ichaona nhandare yendege yeSpain network ichidzoka kumatanho epamberi enzvimbo nhatu dzese dzekuenda, kusanganisira Barcelona neMadrid.
Malaga inodiwa kwazvo nevanozorora kutenderera pasirese
Spain yagara iri nyika yakakosha kuQatar Airways
Malaga yakava nzvimbo yechitatu yeSpain yekuenda kuQatar Airways network munaJune 2018
Nzvimbo yakakosha yezororo yeMálaga inodzokera kuQatar Airways 'nzira network sezvo Spain inotanga kurerutsa zvirambidzo zvekufamba kwevashanyi. Malaga inodiwa kwazvo nevanozorora kutenderera pasirese, uye vafambi vakazara vakabaiwa vachakwanisa kushanyira zvakare neQatar Airways.
Qatar Airways Mutungamiri Mukuru weGroup, Anokudzwa VaAkbar Al Baker vakati: "Apo nyika inotanga kuvhurika zvakare, isu kuQatar Airways takamira takagadzirira kutungamira mukutsigira hupfumi hwepasi rose nehupfumi hwevanhu sekuratidzwa nerutsigiro rwedu rwekushanya kuSpain. . Spain yakagara iri nyika yakakosha kune yedu yendege, sezvakaratidzwa nehukama hwedu hwakadzika neIberia uye nekuvakazve kutsiga kweSpain network.
“Network yedu yepasi rose iri kuenderera mberi nekuvaka nekuwedzera kunyangwe munguva dzino dzakaoma. Vapfuuri vanobhuka neQatar Airways vanogona kuzviita vaine chivimbo chakazara chekuti vanogona kuita shanduko pakubhuka kwavo kana zvinhu kunze kwekutonga kwavo zvikanganisa zvirongwa zvavo zvekufamba. ”
Málaga iguta rakanaka uye rine vanhu vanobva kune dzimwe nyika rakavakirwa pamwe neCosta del Sol yekuSpain mudunhu rekumaodzanyemba kweSpain reAndalusia. Guta iri rinopa zviitiko zvakasiyana siyana zvekuti vashanyi vafarire, sekutsvaga nhoroondo yenhoroondo yeRoma, kubhachura pane imwe yemahombekombe eMálaga anoshamisa eMediterranean kana kushanyira imwe yemamuseum. Vazhinji vafambi vanobatanidzawo rwendo rwekuenda kuMalaga nekushanyira kumaodzanyemba kweSpain nzvimbo dzeMarbella nePuerto Banus.
Málaga yakava nzvimbo yechitatu yekuSpain yekuenda kuQatar Airways network munaJune 2018 uye ichazoshandirwa nendege neChishanu neSvondo kubva kuDoha, ichishandisa imwe yendege yazvino, inochengetedza uye nendege yeAirbus A350-900 ine zvigaro makumi matatu nematanhatu muBusiness Class uye 36 muEconomy Kirasi. Iyo sevhisi yemwaka ichashanda kubva 247 Chikunguru kusvika 2 Gunyana. Qatar Airways inoshandisa ndege dzinokwana gumi neshanu vhiki nevhiki kuenda nekudzoka kuSpain, nendege dzezuva nezuva dzeBarcelona, ​​nendege gumi dzevhiki nevhiki dzeMadrid uye munguva pfupi iri kutevera ndege mbiri dzeMálaga vhiki nevhiki.
Qatar Airways nguva pfupi yadarika yakawedzera kudyidzana kwayo pamwe nenhengo yenyika, Iberia. Iko kuwedzera kwekudyidzana kwekushambadzira kuchawedzera huwandu hwenzvimbo dzinowanikwa kune vanofamba neIberia kubva pa29 kusvika 36 paQatar Airways 'network, kusanganisira nzvimbo nyowani muAngola, Australia, Mozambique, New Zealand neSouth Africa. Qatar Airways vafambi vachabatsirwawo nekuwedzera kubatana, nekwaniso yekubhuka kuenda nekubva kune dzimwe nzvimbo ina paIberia network muBrazil, Chile, El Salvador, Guatemala neSenegal. Sevabatsiri vepasi rose, Qatar Airways Privilege Club uye nhengo dzeIberia Plus vanovimbiswa kucherechedzwa mamiriro avo ezvemabhizimusi pamwe nemabhenefiti anosanganisira kuwana nzvimbo dzekutandarira pasi rese, kuburikidza nekupinda-mukati, mvumo yekutakura mukwende, kukoshesa kupinda-mukati nekubhodha pamwe nekuwedzera nekuregererwa kwemamaira, pamatanho evatakuri vavatambi.
Málaga purogiramu kutanga 2 Chikunguru (Chishanu neSvondo):
Doha (DOH) kuenda kuMalaga (AGP) QR 155 inoenda 08:00 inosvika 14:40
Malaga (AGP) kuenda kuDoha (DOH) QR 156 inoenda 15:55 inosvika 23:55